Inona ny vidin'ny bisikileta vatokely? - Hitaingina Bisikileta
Tena > Hitaingina Bisikileta > Mandady bisikileta - mitady vahaolana
Inona ny vidin'ny bisikileta vatokely?
Ireo maodelin'ny bisikileta vatokely amin'ny fitsapana
Ho an'ny mpanamboatra
Canyon Grail CF SL 8.0 2599 euro Ho an'ny mpanamboatra
Ghost Endless Road Rage 8.7 LC 2799 euro Ho an'ny mpanamboatra
Fuji Jari 1.1 2999 euro Ho an'ny mpanamboatra
Merckx Strasbourg 71 3499 euro Ho an'ny mpanamboatra
Raha manana fanontaniana momba ny bisikileta ianao, soraty fotsiny aho amin'ny hevitra na manorata ahy amin'ny Instagram Faly aho fa afaka manampy eto ary hanomboka avy hatrany izahay rehefa tonga ny bisikileta voalohany avy any Fuji, hitako ny rohy rehetra tamin'ny otto .de. momba ireto bisikileta manaraka ireto ao amin'ny famaritana ny lahatsoratra fa ankehitriny momba ny jari 2.1 izay nahita ny fitsapana tamin'ny jari1.1 dia mahalala ny fientanam-poko niandrasana ilay bisikileta ary ny zavatra tiako dia ireo teboka maratra amin'ity soroka mampihomehy ity eto. eo ambanin'ny fantsona ambony no misy miraikitra ary eto amin'ny rantsantanana 2.1 voafetra f raha toa ka manana mpiambina fotaka ianao, jiro ary e eto hi. manana fitoeran'entana avo lenta, manana ny endriny aluminium izahay ary misy fork karbonika ity bisikileta ity dia azo atolotra ao anatin'ny tapa-bolana, izay tena tsara amin'ny endriny 52 ka hatramin'ny 60 lehibe indrindra mba hahafahan'ny olona kely sy lehibe manafatra ny bisikileta ananantsika kapila mekanika freins avy any Tektron Miaraka amin'ny freins mekanika mifandrindra ankehitriny dia tsy dia henjana loatra ianao dia mila mieritreritra fa rehefa misafidy kodiarana ianao dia mila manao bisikileta gravel foana ho toy ny iray amin'ireo teboka izay misy kodiarana Toptoper ihany koa miaraka amin'ny freins hidrolika, fa ny Ny freins mekanika dia miasa amin'ny fifamoivoizana ao an-tanàna sy amin'ny fampiasana mahazatra eny amin'ny làlambe, tsara loatra, fa raha mitondra fiara midina be ianao na mandeha haingana dia haingana ary avy eo te-hanapaka tampoka dia somary tsara kokoa ny frein hidina hydraulic noho ny fitaterana azy ireo. ny fitondran-tena sy ny fifehezana, manana onja roa heny in-folo koa isika dia avy amin'ny shimano tiagra Toy ny levers frein shift ary ny bisikileta iray manontolo dia mavesatra ihany noho ny fitaovana rehetra amin'ny 12.71 kilao, fa yo Afaka mavesatra hatramin'ny 130 kilao ianao, ka na somary mavesatra aza ianao na mitady bisikileta izay azonao atao ihany koa ny mandeha bisikileta -Mety handeha hanao traikefa nahafinaritra ianao, azonao atao tokoa ny mitondra ny bisikileta, miampy ireo teboka hitanao rehetra amin'ny ary ny soroka soratana voalaza ihany no hita amin'ny manaraka eo ambonin'ny bisikileta tsara fitsidihana bisikileta al 3 izay azo amin'ny bisikileta tsara vidy amin'ny 1,149 euro Misy ihany koa ny haben'ny endriny 52 ka hatramin'ny 61 ao anaty tahiry miaraka amin'ny bisikileta tamin'ny taona lasa modely , izay tsy voatery ho ratsy kokoa, ny kodiarana dia kely ny mombamomba azy ireo saingy azo ovaina mora foana izy ireo, vonona ny tsy misy fantson-drano ary afaka hatramin'ny 45 milimetatra ny fanesorana ny kodiarana, koa raha nividy ilay bisikileta ianao ary te hampiasa azy io indrindra- lalana, azonao atao ny mametraka azy amin'ny kodiarana mendrika avy hatrany, ary na dia azonao atao aza ary te-hiova fo tsy misy fantsona eto koa, manana rindrina sy fork forona isika, manana mari-pamantarana vaovao isika indroa, amin'ny marika nalaina avy shimano dura ary eto ihany koa, manana famahanana kapila mekanika avy amin'ny tektron isika ka h ary koa, tsy voatery ho ny fampisehoana freins tena tsara indrindra fa noho io vidiny io dia mila mampandefitra ny bisikileta ianao ka 10.5kg mahery dia azonao atao ihany koa ny mitondra hatramin'ny 125kg ary be dia be izany ary manana teboka maro ianao avy amin'ny bisikileta manaraka gtgt dia marika iray niforona teo akaikin'ny mpisava lalana bisikileta gary taylor ka be dia be ny zavatra niainana avy amin'ny sehatry ny bisikileta an-tendrombohitra no nidina tao amin'ny marterie ary ankehitriny dia hita ihany koa any amin'ny ahitra, ny ampahan'ny bisikileta dia matetika miaraka amin'ny maodely samihafa ary eto manana ny manam-pahaizana lehibe izahay, izay tonga amin'ny loko tsy dia mahazatra loatra, ny kibay ambony dia voadona satria ny plastika malefaka amin'ny gt-mahazatra dia misokatra ao anaty fantsona ambony ary izany dia miteraka triatra D mahazatra ity izay efa 200 metatra ny seho GT. Ny halavirana dia azo antoka fa tsy mahazatra amin'ny famolavolana ary ny vidiny dia mbola eo amin'ny 1699 Euros miaraka amin'ny rano velona ilay bisikileta dia misy refy 48. misy hatramin'ny 61 ary matoky izahay eto na GT mahalala zavatra eto indroa folo heny ny fandikan-teny grx front derailleur miaraka amina derivleur aloha tiagra fa indrisy eto tsy misintona azy io amin'ny grver shift frein gripa fa ny levers freins an'ny ny vondrona tiagra dia miadana ihany koa amin'ny alalàn'ny herinaratra eto, izay tena eto Mila lazaina fa tsy misy afa-tsy kapila fametahana 140 milimetatra ao ambadika ary vitsy ihany izany ary mandany ny herin'ny freins izay azo ovaina mora foana sy haingana ary 160 milimetatra kapila vita amin'ny birao namboarina teo amboniny, inona koa no tokony hilazana fa ny bisikileta Tsy vonona tsy misy fantsom-batana izy ary manana diplaoma 16 manana fiparitahana somary mivelatra avy amin'ny tohana, ka mora ny mifehy na dia eny an-tsaha aza, hitantsika koa teboka maratra marobe eto ary ny lanjany dia ambany ihany noho ny vidiny 10,47 kg no vidintsika, ka eo ambanin'ny 10,5 kg fotsiny, eny, tsy misy bisikileta fantatry ny razamben'ny bergamont 4 eto, manana ny maika be ao ambadika aho elitist ka ny endriny voalohany dia misy fehezan-tsolika ary eto dia hitantsika fa ny bisikileta misy alikaola tena mora vidy 1000 euro amin'ny bisikileta xxl dia misy ny habe 53, 57 ary 61 ka ho an'ny olona salantsalany sy izaho manana haavo 1 metatra80 tsy misy modely eto hoe karazana vondrona manao ahoana no misy eto, roa ny tahan'ny fitaovana 9 haingam-pandeha miaraka amina vondrona switching shimano sora somary sarotra ok nefa eto izahay amin'ny vidiny ambany ihany koa ary milanja 11,1 kilao ny bisikileta ary manana lanja tokana azo ekena 115 kg fotsiny amin'ny marika nalaina, ka tsy maintsy raisinao io raha efa mitondra lanjan'ny vatana 90+ ianao, dia somary sarotra kokoa izany indraindray ary avy eo mila mitandrina ianao rehefa manangona fa tsy mihoatra ny ny fetra 115 kilao, izay mampiavaka ny bisikileta ankehitriny dia manana toerana fipetrahana be fanatanjahan-tena izy, izany hoe miankina lavitra amin'ny vatanao ianao ka ny aerodynamika dia mahantra Erwegs ary haingana kokoa ary eny ny lokony mazava ho azy fa mpitazona maso tanteraka ka raha te hisarika ny fiheverana toa ny bisikiletanao dia ho afa-po amin'ny Grandurance 4 avy any Bergamont ianao, misy isa mihena ho an'ireo olona manao bisikileta fa tsy dia be loatra ny isa Screw amin'ity bisikileta ity, tsy misy teboka hafa eo amin'ilay fantsona ambony azonao apetraka ao anaty tranom-borona roa. ny sary d Ampidiro ny telozoro, fa tsy hahita teboka boribory eo an-tampon'ny fantsona ambony ianao, fa misy kosa ny fotaka sy ny rafitry ny valizy izay mifanitsy amin'ireo teboka ao anaty tendrombohitra eo amin'ny fork sy miraikitra amin'ny fork no fijanonana rojo.
Heveriko fa tsara ny bisikileta manaraka. Heveriko fa ny loko miloko dia milay ary toy ny fantsona ambony sy ny fantsom-by, ity ilay antsoina hoe hydro tubing, izay novaina ny savaivon'ny fantsona aluminium an'ny fantsona midina sy ambony, izay somary lafo ny manamboatra azy Avy eo dia hita amin'ny farany fa kalitao avo lenta io ary hitako fa manintona be ilay bisikileta manana vidiny lafo ho an'ny centfirion crossfirekies 2000 miaraka amin'ny 1850 euro ianao dia afaka mahita ny haben'ny frame ho an'ny bisikileta xxl ary manana sakany somary malalaka koa ianao faritra aisle misy dikanteny inim-polo heny an'ny shimano tiagra Saingy indrisy, etsy sy eroa w Ny fiovana sy ny frein avy amin'ny grx 400 dia tena mendrika homarihina manokana, noho izany ny fampisehoana freins dia mazava ho azy fa tsy azo ampitahaina amin'ny frein disc mekanika , ny grx 400, izay notsapako ny tenako, dia tena freins tsara tokoa, tena marina tokoa ary ny ergonomika an'ny leverin-tsisim-bidy araka ny voalaza dia manana fahatsapana foana ianao fa mifehy tanteraka ny jiro amin'ny valizy ary eto koa miaraka amin'ny saha dia tonga amin'ny lanjan'ny 12,7 kilao isika fa tsy maivana fa ny lanjan'ny bisikileta azo ekena dia 135 kilao tena semi-tranofiara izay tena azonao hamafisina eto dia ny endrika mahomby heveriko fa tiako izany tena manana fiarovana mitovy amin'ny valizy faran'izay avo lenta aho ary eny, na dia mety tsy tianao aza izao ary raha tsy tena ilaina amin'ny fampiasana isan'andro dia esory fotsiny izany Raha manapa-kevitra amin'ity bisikileta ity ianao dia saika nividy ity bisikileta ity rehefa nitady ny bisikileta vatokiliko aho tamin'izay dia nanao bisikileta ns vaovao ny bisikileta dia fantatra amin'ny bisikiletany ao amin'ny faritra misintona izay manolotra bisikileta maloto sy bisikileta midina, izay niavian'ny marika mihitsy avy any Polonina sy ny rahavavy marika mety ho fantatrao ihany koa rondo sy ny marika manokana en ankehitriny dia mamoaka bisikileta gravel ary tena mahavariana izy ireo, satria azonao atao mazava ho azy fa ny si sterbrand rondo dia tsy lavitra ny ns ka ny rafitra aoriana rehetra dia remin iscent ny rondo ruut vaovao ary ny famolavolana dia minimalist ary tsotra tahaka ny hitanao avy any rondo fantatrao fa afaka mahita teboka maro eto ianao izay tiako ihany koa ankoatran'ny zavatra rehetra tsy dia mankaleo loatra, manana ianao nanapa-kevitra ny loko Oilslick miloko ho an'ny taho, nanapa-kevitra ny hampifandray ny fefy alimina amin'ny fork karbonika indray.
Sambany izahay no manana rojo rojo eo aloha, izany hoe fitaovana kely kokoa noho ny miaraka amin'ny famantaranandro 2 x 10 2 x 11 2 x 9 izay manana frein disc misy mekanika dia efa nitazona ny vondrona apram sram nandritra ny herintaona aho ary mila lazao hatrany am-piandohana fa tsy nisy zavatra tsy marihako mazava novakivakin'ny kapila mekanika ary tsy vaky dieny izao ary ny vondrona sram apex koa dia tsy manana kalitao avo indrindra. Fa araka ny nolazaiko tany am-piandohana dia tena tsy diso aho ary fotsiny rehefa avy bisikileta nandritra ny herintaona teo ho eo ary koa nahafantatra ny kalitaon'ireo fitaovana hafa sy ny rafitra fanamafisam-peo, fantatro fa mbola betsaka ny toerana azo hatsaraina, fa mba handrosoana dia heveriko fa tena mety ny vondrona, azonao atao ny miatrika io, avo ny tendrombohitra, na dia somary sarotra kokoa noho ny atody aza izao misy refy roa ka hatramin'ny folo ary azonao atao ny mizatra amin'ny herin'ny freins, fa tsy azo ovaina loatra, ka ny kodia, ohatra, dia mampidi-doza tokoa ankehitriny amin'ny frein, noho izany ny bi ke manaraka sy ny farany amin'ny andian-dahatsoratra hitako fa afaka mamerina amboary izany ary misy ihany koa, ny rondo ruut al 1 dia azo jerena ao amin'ny fahrrad xxl ambanin'ny 2000 euro ihany ary noho izany no lafo indrindra amin'ity serivisy ity. mankalaza ny rondo al 2 ny tenako ary mbola mahatalanjona tanteraka aho ka mbola mahafaly be ihany amin'ny bisikileta mahafinaritra be izany mahafinaritra ahy tokoa ny mitondra fiara eny ivelany nefa mahafinaritra ihany koa ny mianjera eny amoron-dalana. -Ny vidin'ny vidin'ny vola dia tena mega eto rondo Tena tiako ny fanamboarana rondo eto miaraka amin'ny rondo al 1 miaraka amina alim-pito mifangaro amin'ny tariby karbaona, indrindra fa eo amin'ny fork dia vahaolana twintip izay midika fa afaka manova ny familiana ianao zoro miaraka amin'ny flipchip 0,5 degre toy izany izay efa nanandrana ny familiako taloha, nanao lahatsoratra aho, mila milaza am-pahatsorana aho hoe tsy mieritreritra an'izany matetika ianao, fa angamba ny iray na ny iray hafa izay tsy zato isan-jato azo antoka fa ny geometry dia hahita fa raha te-hihoatra ny arabe ianao na ny klioba eny an-dalana dia azo atao tsara ny manao ilay bisikileta ary afaka milalao miaraka amin'ny puce flip ianao izay tena mahafinaritra h eto, na dia indroa in-folo aza isika tahan'ny fitaovana miaraka amina vondrona shimano rd rx 400, b miaraka amin'ny grx 400 izay tsy tianao miankina amin'ny freins sy ny levera vita amin'ny kitapom-batsy ary mazava ho azy fa mampitombo be ny fahombiazan'ny bisikileta ary izao dia ho iray amin'ireo bisikileta tena tiako hividy bisikileta vaovao izay maivana ihany koa 10.3 kilao ny bisikileta maivana indrindra avy any aminy. vao nanolotra izay tiako indrindra amin'ny lamosina toy ny ns bisikileta izay atsofoka kely ny lasely dia ny fijerin'ny filigree azy rehetra ary mety ho voamarikao hoe bisikileta inona no misy na dia eo am-pitondrana fiara aza adino aho dia ampahafantaro anay ao amin'ny fanehoan-kevitra, ny hafa dia azo antoka fa feno fankasitrahana ireo torohevitra rehetra raha manontany ianao hoe inona no tian'izy ireo haneho hevitra na hanoratany ahy ao amin'ny instagramnandramana izahay izao ilay bisikileta mainty ao aoriako ao amin'ny lahatsoratra manaraka izay afaka maminavina hoe bisikileta inona no mahazo isa 100, misaotra nijery, mifankahita amin'ny lahatsoratra manaraka
Inona no maha samy hafa ny bisikileta amin'ny hazakazaka sy ny bisikileta?
Ao amin'nyvatokely-Bisikiletalava noho nyBisikileta. Izany dia miteraka malama kokoa sy ny - hovatokelymahazatra - dynamika mitondra fiara, izay miavaka amin'ny fahatsapana ny filaminana sy ny fampiononana.17 feb 2020
Bisikileta gravel, bisikileta cyclo-cross, izay tianao hiantsoana azy ireo, ireo no soavalin'ny tontolon'ny bisikileta. Ary noho izany indrindra no antony mahatonga ny olona mihamaro hatrany mividy azy ireo tsara - eny, ho solon'ny bisikileta amin'ny hazakazaka. Na mety ho bisikileta faharoa.
Iray izay ampiasainao amin'ny ririnina na amin'ny alàlan'ny mpandeha. Na izany aza, raha mieritreritra ny hividy iray ianao, dia tsy isalasalana fa hipetraka ao an-tsainao io fanontaniana io. Rehefa mividy iray ianao dia ahoana? miadana kokoa noho ny bisikileta amin'ny hazakazaka? - eny, ary raha misafidy bisikileta vatokely ho bisikileta tokana ianao dia ohatrinona ny very amin'ny namanao amin'ny bisikiletany sy ny lalana miloko marefo? - tokony ho hitantsika ve, Mat? Manao siansa sy zavatra hafa ve? - Eto izahay, sa tsy izany? - Tokony hanao siansa ve isika? - Siansa mando sasany? - Siansa mando - Siansa mando - Reko fa tsy tantera-drano. - Ka inona izany ny fitsapana? Manana bisikileta roa izahay.
Samy miaraka amin'ny metatra mandeha amin'ny herinaratra hahazoana antoka fa tsy miova ny haavon'ny zava-bitantsika. Ny iray dia ny Canyon Aeroad CF SLX ary ny iray kosa dia Trek Crockett, izay an'ny sokajy midadasika hatrany amin'ny bisikileta cyclo-cross mankany bisikileta gravel. Mora ny fitsapana.
Nohamafisinay tamin'ny valo kilometatra fotsiny ny dia rehetra. Manana karazana fidinana miolakolaka telo isika, boribory fohy amin'ny arabe fisaka alohan'ny hiakarantsika io fiakarana farany io. Fizarana telo samy hafa.
Hanao izany indroa izahay, indray mandeha amin'ny bisikileta tsirairay. Ary hitazona fampisehoana antonony hafa kely izahay. Handeha amin'ny faran'ny ambany i Matt, 200 watt.
Ary handeha amin'ny faran'ny somary avo kokoa aho, 300 watt. Avy eo dia ampitahainay fotsiny ireo roa. Mihazakazaha laharana voalohany, bisikileta miampita, bisikileta fifaninanana Fanombohana kely loha, raha ny marina.
Lasa izao. - Mety ho marimaritra iraisana io. Tsara ry sakaiza hahita anao tsy ho ela! Ka inona no antenaintsika amin'izany? miadana kely, ary izany dia ampahany satria milanja kely kokoa.
Ka iray kilao eo ambonin'ny bisikileta misy an'i Matt ary roa kilao ny ahy. Saingy heveriko fa ny kodiarana no mahatonga anao hiova lehibe indrindra. Hitanao fa misimisy kokoa sy misy endrika ireo.
Ka tsy misy izany hoe kodiarana cyclocross / gravel general. Misy karazany maro. Ireo no Continental CycloCross Racers.
Tena tsara lavitra tokoa izy ireo eny ivelan'ny lalana. Tsy kodiarana fotaka mandalo sy mandalo, fa mahazaka tsara kosa. Na eo aza izany dia tsapan'izy ireo fa mihodina haingana be izy ireo.
Marina fa tsy haingana toy ny kodiarana akory, saingy heveriko fa tsara be ry zareo. Maniry fotsiny aho fa any an-toeran-kafa ary hanao izay betsaka azoko atao. - Eny, mihazakazaka laharana voalohany amin'ny bisikiletako azo antoka.
Lasa izao! Nahazo ny tongotro fanindroany aho. (Exhale) Ary inona no azoko lazaina, tampon'ilay bisikileta an-dàlambe izy io ary mahatalanjona tokoa, ary mieritreritra aho fa afaka miteny kely kokoa, ary tsy ny zavatra mahazatra toy ny lanjany sy ny kodiarana ihany no mampisaraka ambony- mamarana bisikileta amin'ny lalana amin'ny bisikileta na bisikileta miampita. Satria amin'ny ankapobeny, ny sisin-dàlana any an-tampon'ny lalana dia manana akorandriaka aody aerodinetika izay mitazona ny rivotra mivoaka sy mamakivaky ny rivotra lavitra kokoa.
Saingy ny aerodynamics dia zavatra misokatra ho an'ny rehetra, tsy jerena ny teti-bolanao. Satria ny antony lehibe mahatonga ny drag dia ny vatanao. Ary eto dia afaka manampy ny frame bisikileta na bisikileta amin'ny hazakazaka.
Satria ambany sy lava kokoa izy ireo amin'ny ankapobeny, ka manitatra anao izy ireo ary mahatonga anao ho lasa aerodynamika betsaka kokoa. (Miaina mafy) - Nanao ahoana izany sakaiza izany? - Eny, toy ny mahazatra. Mahatalanjona, tena - eny (chuckle), ara-drariny, heveriko fa - nanao ahoana ilay bisikileta vatokely? - eny, tsara izany, tena tsara.
Raha ny marina dia nahagaga izany. Tsy nampino ilay razambe. Ny fidinana an-dàlana dia toy ny tamin'ny lalamby.
Ka te hahalala ny tena hevitrao momba azy aho. - Tano izany. Handeha ity aho.
Mahafinaritra izany. Eny, eo amin'ny lafiny fahatsapana fiara dia samy hafa be ireo bisikileta roa ireo. Avy hatrany Rehefa mandeha amin'ny bisikileta hazo fijaliana ianao dia mahatsapa ho ambony kokoa fotsiny.
Amin'ny ankapobeny, ny bracket ambany dia avo kokoa amin'ny bisikileta hazo fijaliana. Noho izany dia mahatsapa be lavitra ny tany aho. Ary eo anoloana ihany koa dia tsapako ho ambony kokoa ny tanin-tanana.
Mazava ho azy fa tsy mamaky ny rivotra amin'ny fomba mahomby. Ary amin'ny resaka fikirakirana, ny bisikileta lakroa dia nahatsapa ho tsara tokoa tamin'ny fidinana toy ny bisikileta amin'ny hazakaza-joro. Fangejana be dia be amin'ity mombamomba azy ity.
Saingy ny hany zavatra tadidinao dia ny hoe rehefa avy niadana ny zoro iray ianao dia tsy handray haingana toy ny hafainganam-pandehan'ny lalana noho ireo kodiarana goavambe. - Ny bisikiletako fa tsy an'i Matt. Ny tsy fitoviana fotsiny, kely kely ny aero ary tsy misy frein disc.
Fa maivana kokoa ny kilao. Jereo izay mitranga. Tsy haiko aloha ny hafainganana, fa ilay bisikileta roa Mahatsiaro ho tsaoka sy fromazy aho.
Ankehitriny dia ny zava-misy fa mihodina haingana kokoa ity iray ity sy ny sisa rehetra amin'izany. Saingy ny fikirakirany dia mampiseho ny fahasamihafana lehibe indrindra. Izy io dia manova be ny lalana, mora kokoa ary tsy dia misy ezaka firy eo amin'ny tantanana - ny ampahany dia satria tery kokoa ny kitondro, nefa azo antoka fa noho ny tena géometry ny bisikileta.
Ankehitriny ny zava-dehibe tokony ho fantatra dia sady tsy tsara no tsy ratsy. Mahazatra ianao fa mifikitra fotsiny. Ary mba ho rariny dia hitanao fotsiny angamba izany.
Mitsambikina ara-bakiteny avy eo amin'ny iray izy ary mankany amin'ny iray hafa. Saingy bisikileta tena hafa mihitsy izy ireo. Marina, ampy ny zavatra mora tohina.
Miadana firy ny bisikileta vatokely? Tokony ho roa kilometatra isan'ora. Na 6,7%.
Ary hafahafa fa mitovy amiko sy i Matt. Toy ny hoe nahitsinay tsara izany. Saingy, araka ny efa nampoizina, tsy tsotra toy izany.
Amin'ny fidinana ara-teknika sy miolakolaka, ny bisikileta vatokely dia tena tsy miadana velively. Ny geometry milamina eo an-jorony mihoatra ny natao ho an'ireo kodiarana mihodina. Teo amin'ny fisaka izy ireo dia nifamatotra akaiky.
Nandritra ny fizarana telo minitra dia segondra vitsy monja no elanelan'izy ireo ary 5% eo ho eo. Avy eo dia namelana ny tsy fitovian'ny fiakarana, mazava ho azy, satria faritra miadana kokoa izy io. Izany no naharitra ela kokoa.
Fa angamba koa satria ny lanjany no zava-dehibe kokoa, indrindra amin'ny hery ambany. Ka i Matt dia niadana 12% tamin'ny bisikileta lakroa ary niadana kokoa aho 9%. Noho izany, ny bisikileta vatokely dia fisalasalana haingana. - tsia. - Tsy amin'ny valinay.
Fa --- tsia, mihisatra izy ireo - miadana kokoa izy ireo. Inona no nolazaiko - haingana kokoa. (mihomehy) (Matt cackles) - Ka miadana kokoa ny bisikileta vatokely.
Tsy misy fisalasalana momba ny valiny, fa ny fahasamihafana dia tsy goavana ary ny zava-dehibe tokony tsy hadino dia ny bisikileta miampita na bisikileta gravel no natao hankanesana eny rehetra eny amin'ny arabe. Sarotra ny bisikileta. Araka ny hitan'i Dan - Eny, tena nahita izany i Dan.
Azonao atao izao ny miteny amin'ny bisikileta aorianay fa tsy afa-po tanteraka izahay tamin'ny valiny. Noho izany dia napetrakay tamin'ny bisikileta cyclo-cross ny andiana kodiarana mba hahitana ny hafainganam-pandehany. Ary tena lehibe ny fahasamihafana.
Haingam-pandeha teo amin'ny fisaka toy ny bisikileta fifaninanana izy io. Ary avy eo amin'ny fiakarana dia nahazo 20 segondra tamin'ny bisikileta cyclo-cross. Raha ampitahaina amin'ny bisikiletako dia mbola 30 segondra tsara kokoa noho ny bisikileta fifaninanana.
Saingy nohazavainay ny ankamaroany tamin'ny zava-misy fa milanja roa kilao ny lanjany. Tsy afaka nanazava ny tohiny izahay, fa segondra vitsy monja izao - eny, ka raha bisikileta miampita, bisikileta gravel, no ho bisikileta tsy manam-paharoa aminao, mendrika ny hampiasa vola amin'ny kodiarana miloko afaka mifidy. mifanakalo eo am-pandehanana. Ary tsy ho sahirana mihitsy ianao - Tsia, tsy izany velively ny bisikileta roa amin'ny vidin'ny iray, izay toa fandresena.
Eny, tsy isalasalana fa ny sasany taminareo dia efa nahatsikaritra izany ankehitriny. Ka ampahafantaro anay ao amin'ny fizarana fanehoan-kevitra, bisikileta graba ihany ve no bisikiletanao? Bisikileta komuter? Ny bisikileta ririninao ve? Ampahafantaro anay ny hevitrao amin'ny hevitra etsy ambany. - Raha mbola tsy nisoratra anarana tamin'ny Global Cycling Network ianao dia tsindrio ny tany, io no fivarotana tokana anao ho an'ny zavatra rehetra tokony hataon'ny Cycling.
Andao hijanona kely miaraka amin'i Gravel isika, ahoana ianao raha tsindrio eto fotsiny eto ambany izay nanandramanao bisikileta gravel tany Wales lalina indrindra. - Marina izany. Ohatrinona ny bisikileta vatokely afaka manao izany fa tsy hain'ny bisikileta mihazakazaka.
Iray amin'ireo ankafizinay, fa tsy hoe satria tena tezitra i Lloydy - Tezitra be izy, sa tsy izany? - Ie, ilay lahatsoratra tena nahasosotra ahy dia teo amin'ny nitaingenanay sy i Matt bisikileta iray tamin'ny bisikileta an-dalambe. Teo amin'ny bisikileta tamin'ny hazakazaka aho. Matt tamin'ny bisikileta e.
Famantaranandro mahafinaritra io, na dia misavoritaka aza aho - tena reraka aho.
Tsy reraka mihitsy ianao - Tsia, nandeha bisikileta fotsiny aho.
Ahoana ny endrik'ilay bisikileta vatokely?
Fehin-kiho lalina mipetraka ambany, mba hisian'ny fitoniana bebe kokoa amin'ny tany somary misavoana, mitovy amin'ny bisikileta an-tendrombohitra 26. Fehin'ny kodiarana lava kokoa noho nyCyclocross-Wheels ho an'ny fahamendrehana mahitsy mahitsy ary, noho ny farany lava, fananana tsara rehefa miakatra amin'ny lalana mideza.
Eny, amin'ny fararano izao ary midika zavatra iray izany: ankehitriny dia misy bisikileta vaovao vaovao vaovao mivoaka izay efa nandrasanay nandritra ny volana maro ary izao dia mijery bisikileta fito misy zavatra isaky ny teti-bola, manana bisikileta latsaky ny 1000 euro ary manana kodiarana mihoatra ny 3500 Euros eo amin'ny elanelan-tany izahay amin'ny bisikileta voalohany izay tsy tendron'ny atsy anatiny ary mazava ho azy fa tsy tokony ho very amin'ny lisitra rehetra amin'ny 2021 ny Cube Nuroad ny bisikileta dia efa ampahany lehibe amin'ny mahazatra. bisikileta gravel fa ny mahazatra amin'ity taona 2021 ity dia namerina ny paleta miloko lasa mangatsiatsiaka kokoa ny goba ary nisy promodel tsara tarehy namboarina, dia ity ilay cube nuroad c: 62 sl heveriko fa tena mahomby tokoa ny endrin'ny karbaona tena miloko no loko miloko tena ny zavatra rehetra dia misy efa ho 4000 euro fa somary lafo ihany koa ka manana ny safidintsika mividy ny géomezika iray mitovy amin'ny maodely fidirana ambaratonga mora vidy kokoa ary eto ny cube nuroad pro dia ao anatin'ny faritra latsaky ny 1000 euro ary be dia be izany lar mahatalanjona mijery tsy mahazatra an'i Cube ity volon-doko miloko fotsifotsy ity, heveriko fa tena mahomby, tiako be dia be izany, lehibe amin'ireo bandy avy any Cube toa tsotra sy tsotra ary eny, tsy manelingelina loatra ary mieritreritra aho fa mandeha tsara izany miaraka amin'ny lohahevitry ny vatokely, ka tendron'ny vao manomboka ho an'ny olona te-handany latsaky ny 1000 euro, izany hoe in-folo monja ny tahan'ny, mba ahafahanao miakatra ny tendrombohitra avo indrindra na dia eo aza ny fanatanjahan-tena kely dia manana taonina ianao avy eo voatsindrona ny toro-hevitra ary mifangaro ny tariby amin'ny lasely sy ny frein izay manao izany. Somary mora kokoa sy tsara kokoa ny zavatra rehetra, hitako fa faritra fidirana an-tsokosoko ary izao dia efa ataon'i Cube ho matotra kokoa io sokajy gravel io, izay mazava ho azy fa mahatonga ahy vao mainka faly kokoa amin'ny maha-gravel buddy anao, arakaraka ny maha-bisikileta ny olona no mahamaika kokoa ny bisikileta ary noho izany dia tena faly aho indrindra ho an'ny manaraka, bisikileta tena ambony, ilay vato cannondaletop lefty carbon 3, raha tsy manao izany ianao toy ny bi ke rehetra, tsy mampino Tsy misy géometry fantatsika fa ao aoriany no ahalalanao an'io fanta-daza io, satria pin-theking an-terrain io dia antsoina hoe ny flex ao aoriana ary mihetsika somary miaraka amin'ilay mitaingina azy, io no mampijaly ny mafy indrindra, hitako izao mampihetsi-po, satria mitaingina làlana vitsivitsy monja miaraka aminy ilay bisikileta ary izany no mety ho antony manaparitaka ny fifandanjana ary mpankafy be ny lebel kerbel aho no niteraka fatratra tamin'ny bisikilety an-tendrombohitra tamin'ny taona sivifolo, fantany fa nahazo ny fanomezana Somary namboarina indray ka mbola mivadika ilay fork eo ankavia dia mazava ho azy avy amin'ny kodiarana ary amin'ny lafiny iray dia toa hafahafa avy any ambony izany, saingy mila mahita ny tenanao faran'izay mahatalanjona afaka sy afaka mametraka ianao izao ny fork eo amin'ny Graefenberg Tsy andriko ny hanandrana azy miaraka amin'ity fork 30mm ity, raha ny fahitako azy dia afaka mihoritra tanteraka anao ianao, izay azo ampiharina amin'ny fisaka rehefa manana atody nfach fotsiny ianao te-handeha ara-dalàna nefa tsy mampiasa hery be loatra amin'ny fork, saingy mazava ho azy fa mieritreritra aho fa tena milay be ilay bisikileta amina vola be dia mitentina efa ho 4000 euro 3700 nefa ianao koa mahazo fonosana feno sy tena tsara miaraka amina famadio kodiarana ary manamboatra 650 hp aza amin'ny kodiarana 47 c ao anatiny, ka toy ny bisikilety an-tendrombohitra sy ireo lahatsoratra ny an'io koa dia super vita. Izy ireo dia mifantoka kokoa amin'ny bisikileta an-tendrombohitra noho ny bisikileta mahazatra na bisikileta, eto koa misy teboka roa ary mieritreritra aho fa ity Speed ​​Release Early Excel ity koa mampientam-po indrindra raha toa ka mametraka ny bisikiletanao haingana ao anaty fiara ianao avy eo manasa anao avy eo. hanala haingana ny kodiarana ihany koa ary izay miasa miaraka amin'ity haingam-pandeha ity ho an'ny excel dia haingana dia haingana. Heveriko fa misy torohevitra mahafinaritra be ho an'ny vola be dia be ao anaty fanangonana bisikileta vaovao 2021, ny grail canyon dia mazava ho azy fa tsy tokony ho banga ny canyon. mieritreritra ny tsy hanova ny rafitra mihazakazaka intsony ary tsy misy vaovao mahavaky tany amin'ity bisikileta e-gravel ity dia voamarika fa tsy nampiasa motera maivana ianao fa ny bosch bosch bosch tena mahery dia mahery avy amin'ny taranaka fahefatra dia motera matanjaka be izay mazàna. ampiasaina amin'ny bisikileta an-tendrombohitra heveriko fa mpamaky tampoka ity zavatra ity ary ny tifitra avo dia avo any an-tendrombohitra dia misy tsela avo dia avo ary ny bisikileta anananao izay mahafinaritra dia miaraka amin'ny Gral mahazatra tsy mora ny paosin-drakitra roa-decker fa heveriko ho mendrika ihany koa ny vidiny, manontany tena aho hoe hanao ahoana ny fizarana e Gravel afaka volana vitsivitsy na ny taona vitsivitsy ho avy hamorona bisikileta manaitaitra tokoa, eny, ilay malaza maodely fa tena mpivarotra ambony toa ny anarana adala CFc fsl ex sarotra izy io izay avy amin'ny mpankafy fironana ary nanapa-kevitra ho an'ny mpamily hazakazaka miaraka amina vondrona vaovao ary misy hevitra loko vitsivitsy fa tsy misy mahasakana fa mbola mijery haingana isika eto amin'izao tontolo izao, noho izany ny bisikileta fidirana izay tsy maintsy ho mora vidy kokoa, izay mety ho tonga miaraka amin'ny tahan'ny fampisehoana vidiny tsy mampino ary eto dia tsy hitanao na oviana na oviana ny fiovan'ny famakiana tany fa izay mandaitra azon'ny ankizilahy sy ankizivavy avy any canyon fotsiny izay iankinan'izy ireo. Na izany aza, tena vao maraina be, zavatra iray vaovao izay nahazo fanavaozana vondrona iray i Grace 7 izay efa natambatra roa ka hatramin'ny folo ankehitriny dia miaraka amina vondrona iraisana iraika ambin'ny folo shimano ary toa tsotra be toy ny taloha, bisikileta tena tsara ho an'i tsy izany vola be izany miaraka amin'ny 1750 euro mora loatra amin'ny teti-bola kely ary eto ianao dia mahita bisikileta aliminioma tena tsara dia tsara miaraka amina singa lehibe ary eny, tena nieritreritra fa somary lafo kokoa ilay foto-kevitra momba ny jeometry na iza no maniry ireo vondrona telo miasa toy ny Eta izay azon'ny fitsidihana, mazava ho azy koa, mividy ny variant an'ny bisikileta Alexs an'ny bisikileta izay mazava ho azy fa lafo kokoa io, io koa dia ho an'ny vehivavy amin'ny karazana loko iellen izay mahaliana fa hitan'ny tsena ankehitriny fa ireo vehivavy maniry Raha te handroaka ny vondrona maniry loko hafa izay maniry singa hafa dia hiverina tsy ho ela ary haka sary eto ihany koa izahay amin'ny consultation manaraka.Rose dia mpivarotra ambony, izay mazava ho azy fa tsy manome fotoana fohy gaga fa amin'ny topy topimaso fotsiny aho te hijanona kely ao amin'ny rose dia tsy misy zava-baovao amin'izao fotoana izao natolotr'izy ireo ny maodelin'izy ireo 20 21 teo am-piandohan'ny talkie dia avy eo tamin'ny fahavaratry ny taona mba nanoloranao ny foto-kevitra momba ny geometrika sy ny fitsaboana manokana ny làlana voafetra izay voatanisa eto amin'ireto mainty tsotra ireto amin'ity taona ity dia tiako ny loko tsotra ary mbola tena mientanentana amin'ny fotokevitra iray manontolo aho nefa mazava ho azy fa lafo be mihoatra ny 4000 euro, efa ho 5000 euro raha misafidy ny vondrona ianao, na eo aza ny ny zava-misy fa mavokely izy ireo dia tsy ho ela dia hitafy zava-baovao sy mahaliana rehefa misy ny bisikileta atsy ho atsy azo antoka fa azo jerena raha mijery bisikileta vaovao ianao mety hahaliana amin'ny 20 120 fa ankehitriny ity bisikileta ity dia tena moto be tokoa Raha te hividy ny ahy manokana aho dia mbola afa-po ihany amin'ny ruthwo misy ihany koa bisikileta vaovao avy any rondo na filaharana vaovao avy any rondo izay hataoko amin'ny lahatsoratra iray hafa ei manana ny bisikileta gravel ny teti-bola manomboka amin'ny 20 21 dia hojereko akaiky kokoa, noho izany azafady mba misoratra anarana satria tsy manadino ilay manam-pahaizana ao amin'ny Virjiny ianao, satria be ny atidoha nikoriana tao amin'ny Rhine, ka zatra izahay , bisikileta matihanina tena teknolojia avo lenta izay mampiseho ny tenany ho toy ny dabilio maivana tena maivana izay nivadika ambony ambany ny géometry iray manontolo, noho izany ilay voalamina, tsy dia nifantoka be loatra tamin'ny geometry gravel iraisana izy ireo fa nanatona azy ireo tokoa nandroso nandritra ny fotoana ela, ny familiana dia lava sy tena fisaka ny kodiarana inkel dia miaraka amin'ny fotony fohy kokoa amboniny ka ny toerana ipetrahana dia mijoro tsara sy milamina ny bisikileta dia tokony hitondra tena, tena, tena tsara ary indrindra amin'ny tanjona amin'ny famerenana ny banky grameen ny zava-drehetra dia toa tena mangatsiatsiaka avy any ivelany, misy vidiny maodely ambony indrindra nisafidianako azy mihoatra ny 10.000 euro tamin'ny vidiny 2700 Euros. Mety ho ilay sokajy misy ranomandry pr kokoa ho an'ny sasany amintsika eny. koa misy an'ity rafitra mpitrandraka hatairana amin'ny ho avy ity na eo ambanin'ny tsorakazo, izay midika fa ny fihoaram-pefy lehibe indrindra dia efa voasivana etoana hitako fa tena mampientanentana ahy satria mahatsapa bebe kokoa fa mila fampiatoana na karazana karazana manintona ny halavany na amin'ny faritra misy ny bozaka sy ny gilasy mba hifaneraserana tsara amin'i Scottish Terra, ny fifamatorana dia mazava ho azy fa ny tsara indrindra amin'ny elite ipex hitanao tsara, manana ny sakany 38 milimetatra isika ary mazava ho azy izay mety tsy hita. any ho any amin'ny taona 2020 n, mazava ho azy fa ny teboka fikosohana kitapo ho an'ny mpitazona tavoahangin-drano sns sns. noho izany ny fikarohana dia tokony ho tena tsara tokoa hitako fa azoko atao ny mandray azy io ary avy eo dia ataoko izay misy ray kely kely no mahita azy tena mampihetsi-po fa ny fialan-tsasatra manaraka dia efa ela lasa izay, tamin'ny taon-dasa dia nisy ihany koa taona nahomby izay hitanao matetika fa i Bergamont koa dia manana kinova elektrika miaraka amin'ny ha haz fazua dia bisikileta fidirana vaoavao vao avy ny si Ny marika scott an'i scott sy ireo hamburger dia efa nandefa kinova ho an'ny vehivavy, heveriko fa tena mahaliana ahy satria eny, inona no ilain'ny vehivavy iray ao amin'ny faritra tsy mitovy tadiavin'ilay iray manontany ilay voalohany dia samy hafa ny lokony hafa noho ny somary mandoko ny loko vehivavy kokoa no tonga eto amin'ity vavahady ity nefa hitako fa tena tsara tarehy ho an'ny lehilahy koa, noho izany dia heveriko fa tena mahomby ihany koa ilay tariby miloko toa mahafinaritra fa ny tena zava-dehibe dia mazava ho azy fa ny lasely izay namboarina tamin'ny anatomia vehivavy ary somary lalina kokoa ilay fantsona ambony ka mora kokoa ny miditra sy mivoaka.
Satria efa ho eo ny géometry dia hitako fa mahaliana fotsiny ny mahita fa ny marika ankehitriny dia manomboka mifantoka amin'ny vehivavy amin'ny maha-vao manomboka azy ireo ary te-hahita fizarazaran-tsena vaovao angamba aho hanao lahatsoratra iray izay jereo izy ireo mijery ny bisikileta avo lenta indrindra ho an'ny vehivavy ny zavatra rehetra dia tsy ho mankaleo intsony izao ankehitriny tsy iharan'ny fampijaliana intsony ny bisikileta fahafito tadiaviko ary araka ny nolazaiko fa ity dia ny tendron'ny ranomandry ihany no betsaka. tarika vaovao isika rehetra dia eo am-pijerena fantsona Mazava ho azy, noho izany mijanona ho bisikileta izay efa nataoko teo amin'ny radarako nandritra ny fotoana ela ary tena te-hitondra aho satria mino aho fa ny marika Decathlon manokana dia mampifaly ny dia, izay ianao miantehitra amin'ny kodiarana fehin-kibo tena marina, tena kely dia kely ary dolara kely amin'ny tany, raha fantatrao ny tapakila ary raha efa tany amin'ny fivarotanao ianao taloha, dia tena tianao daholo ny sokajy tsirairay amin'ny fanatanjahantena , na hoe hoe pady na miakatra sambo, dia miakatra an-kalalahana na inona na inona izy ireo ny marika azy ireo dia marani-tsaina sy tsara tokoa ka mamoaka vidin'ny fifaninanana izay mampihorohoro ny mpamokatra efa niorina ary ity bisikileta lavitra ity dia ampiasana ireo olona eny an-toerana miaraka amina Shimano Grx sy fork Carbon, tsy vitan'ny hoe misintona tena izy mahafinaritra satria tsara be dia be izay tsy milaza na inona na inona eo anelanelany na zavatra eo amboniny fa tonga miaraka amina loko beige volamena tena tsotra sy tsotra miaraka amin'ny vidin'ny fifaninanana 1900 euro na azo esorina tokoa ary iza ary amin'ny habetsaky ny zavatra namokarana azy, mahaliana ihany koa, satria tsy fantatrao raha tsy mitovy saina ianao dia andramo aloha na mandefasa sombin-javatra marobe eny an-tsena mba hamita fotsiny ny fizarana tsena, tsy manao izany izahay fantatro fa nanandrana nanafatra ny iray ho fialamboly aho ary ny habeny ihany no misy ugabl e saingy mijanona tsy mihetsika aho fa manana ireo zazalahy mivoaka avy ao anaty korontana voasoratra izy ireo ary eny izy ireo no kodiarana fito nahasarika ny masoko tato ho ato dia matetika no nanontaniana aho tato ho ato izay gripa azonao atolotra ary ankehitriny maro ny vaovao mivoaka ary manandrana mampiditra vaovao, fa aza adino foana rehefa mipoitra ny bisikileta vaovao ary aseho izany dia midika koa fa bisikileta efa niasa maro no napetraka eny an-tsena toy ny ebay classifieds na amin'ny teny alemà ary mendrika jerena foana izany raha mijery azy eo no eo ianao dia te hividy bisikileta vaovao, tena faly aho fa hisy famatsiana bebe kokoa atsy ho atsy, fa ny onjan'ny fangatahana tonga any Gremmel-Bikes dia izao nanosika bebe kokoa ary azafady mba ampahafantaro ahy amin'ny fanehoan-kevitra hoe bisikileta inona no tiako hojerena manaraka izay tiako hojerena ilay lahatsoratra manantena ny torolàlana momba ny fanehoan-kevitra aho ary hahita anao ny lahatsoratra manaraka mandra-pahatongan'izany
Moa ve bisikileta graba iray miadana kokoa noho ny bisikileta amin'ny hazakazaka?
Ny valiny lava. Ohatrinonabisikileta vatokely no miadana kokoanoho ny bisikileta eny an-dalana? Voalohany indrindra, ny kodiarana dia manana fanoherana mihodina kokoa. Malalaka kokoa, miaraka amin'ny mombamomba azy ireo ary tsy dia misy tsindry ny rivotra, mihodina fotsiny izy ireo noho ny kodiarana.25 nov Feb 2020
Inona no maha samy hafa ny bisikileta vatokely sy bisikileta?
vatokely-bisikiletadia toy ny hazo fijalianabisikiletavoalohany indrindra amin'ny bisikileta fifaninanana. Na izany aza, manana kodiarana midadasika kokoa izy ireo mamela ny hafainganana haingam-pandeha amin'ny lalan'ny ala sy ny kijana. Ny axis lehibe kokoa amin'ny irayBisikiletaary ny fitoniana avo kokoa dia midika fa afaka mampiasa làlana ala sy ahitra eto koa ianao.
Mety amin'ny fampiasana isan'andro ve ny bisikileta graba?
Bisikileta vatokelymampiavaka azy manokana amin'ny fahaizany manovaova. Ireto bisikileta manaraka ireto dia aterina amin'ny ozinina miaraka amina fotaka, valizy ary jiro. Vonona tsara amin'ny fiainana andavanandro ianao. Azonao atao koa ny mampiasa nybisikiletaho anao koavatokelyAraraoty ny fitsangatsanganana an-tsehatra sy fanaovana bisikileta.10 des 2020
Ohatrinona ny kilometatra vitanao mitaingina bisikileta?
Raha vantany vao azonao antoka ny amin'nyBisikiletatokony hahatsapa ny fitarika nyhafainganam-pandehatraikefa an-dalambe. Ireo mpandeha dia afaka mitaingina hafainganam-pandeha hatramin'ny 30 kilometatra isan'ora: ao anaty trano matetika tsy misy olana amin'ny bisikileta. Ho zatra ny hafainganana ianao ary hankafizinao.03.22.2021
Azonao atao ve ny mamadika bisikileta amin'ny bisikileta?
Fa maninona indrayBisikileta vatokely
Ary satria tiako hizaha toetra ny fetra misy eo amin'ny karazana bisikileta. Iray kilasikaBisikiletamiaraka amina vy ary na dia ny fork Cromovelato aza. Izay no fahafoizan-tena ambony indrindra avy aminy hafainganam-pandeha tokana, fixie na izao aGravelbikenyAza. Ny bisikileta toy izany dia tena tsy natao ho an'izay.04/22/2021
Ahoana no ahitako ny bisikileta vatokely mety?
Soso-kevitra ROADBIKE: Raha mitady bisikileta azo zahana sy mahitsy ianao dia mifidy irayGravelbikemiaraka amina fohy kokoa. Ao amin'nyGravelbikesmisy fahasamihafana eo amin'ny rafitra geometry sy ny toerana misy azy. Ho fanampin'izany - toy ny mahazatra rehefa mividy bisikileta - dia tokony hapetraka tsara nymetyHaben'ny frame.08.04.2021
Inona no atao hoe bisikileta azo tapaka?
Ho an'ireo vao manomboka dia mety ho 26 na 28 izanyHetezo. Isaky ny fitomboana dia mihasarotra hatrany izany. Rehefa mitondra eo am-pofoanao ianao dia azonao atao tsara ny mandrindra ny dianao. Raha ny fahitako azy dia tsy maintsy atao ihany koa ny refy hafainganam-pandehaBisikileta.27 mart 2020
Inona ny hafainganana haingam-pandeha tsara rehefa mandeha bisikileta?
nyHaingam-pandeha eo amin'ny bisikiletamatetika 10 ka hatramin'ny 25 km / ora. Ny bisikileta iray misy fanampiana voafetra amin'ny pedal ('Pedelec') dia manohana ny mpitaingina hatramin'ny irayhafainganam-pandehamanomboka amin'ny 25 km / ora, maodely sasany hatramin'ny 45 km / h (S-Pedelec).
Ahoana ny famandrihana bara mandady amin'ny bisikileta?
Mitadiava fitsangatsanganana bikan'ny bisikileta eo akaikinao na fitsangatsanganana amin'ny pedal tavern amin'ny toerana alehanao na aiza na aiza any Etazonia. Zahao ny fisian'ny fitsidihan'ny pedal pub ary soraty ny andro sy ny ora mety amin'ny vondrona misy anao. Manaova sonia fanesorana, misafidy ny fijanonanao, manomana mialoha sy aorian'ny fitaterana, manapa-kevitra ny amin'ny zava-pisotro, ary alamino ny fety aorian'ny fety!
loza ateraky ny sakafo tsy misy gluten
Aiza no hamandrihana boaty bisikileta mandady any Dallas?
Dallas Bike Bar | Mamandraha The Crawl Bar an'ny bisikileta Dallas malaza indrindra! Mitsitsia vola amin'ny safidinay malaza indrindra, izay misy vondron'olona hatramin'ny 8-75 afaka manofa bisikileta fety iray na maromaro ho an'ny fety pedal feno pedal feno 2 ora ao afovoan-tanàna sy Deep Ellum!
Bisikileta vita amerikanina ve ilay mpandady tongotra?
Ny Pedal Crawler vita amerikana dia feno fiasa premium izay tsy ho hitanao amin'ny trano fivarotana pedal sinoa na holandey. Rehefa mitady bisikileta fety ambony ianao izay hitondra ny traikefa tsara indrindra ho anao sy ny mpanjifanao dia aza mitady lavitra intsony.